China Factory Wholesale 18inch 5hole Aftermarket Aluminiyam ingxubevange Wheels abavelisi kunye nababoneleli |Rayone
Factory Wholesale 18inch 5hole Aftermarket Aluminiyam ingxubevange Wheels
17/18 Intshi Aftermarket Alum...
Intengiso eshushu yokupeyintwa ngokupheleleyo 17/1...
18x.8.5 Intshi yeAluminiyam ingxubevange...
Top Mesh Deisign18Inch Alumi...
Amavili eFactory Aftermarket ...
Yenzelwe ukuba ibonakale ingakholeleki ngelixa igcina umoya womdyarho kaRayone kunye nokusebenza.Ubunzima obulula be-A050 benziwa yindlela yokwenza ukuhamba.Yenziwe kwi-18 × 8.0 kunye ne-2 eyahlukeneyo yokugqiba umgangatho.NgoMnyama okanye uMatt Mnyama
Ngaba amavili engxubevange akrweliweyo anokurusa?
Imikrwelo kunye neRust kwi-Alloy Wheels
Amavili e-alloy ayinto enkulu yetekhnoloji.Zibukeka zintle, kwaye ngenxa yoko ziza kwiimoto ezininzi ezintsha.Nangona kunjalo, abaqhubi abaninzi bahlala bezibuza ukuba ngaba amavili e-alloy akrweliweyo aya kuba nomhlwa.Ngaba kufuneka bahlaziye lonke ivili ngomkrwelo nje omnye omncinci?
Hayi, ngokobuchwephesha amavili e-alloy awavuthi.Nangona kunjalo, ziyakhuhla, nto leyo efana kodwa yahluke kancinane ekuruseni.Nangona umhlwa udala umbala omdaka-orenji, umhlwa ubangela amabala amhlophe kwivili lengxubevange.
Umkrwelo unokubangela ukuba amavili e-alloy aqale ukugqwala.Oku kungenxa yokuba, ngelixa amavili e-alloy anesiphelo esikhethekileyo sokukhusela esenzelwe ukuthintela ukubola, ukukrwela kunokubangela ukuba oku kugqitywe kuhlatywe kwaye i-corrosion inokungena kwi-gap, evumela ukuba i-alloy yonakaliswe.Emva kokuba i-lacquer yokukhusela i-coat iphulwa, i-corrosion inokwenzeka kakhulu ukuba ilandele.Ayikuthandi ukuphoswa lithuba.
Ndingawususa njani umhlwa/umhlwa kumavili ealloyi yam?
Umhlwa unokususwa ngokufanayo nomhlwa.Ukwenza njalo, thenga into yokususa umhlwa, kodwa qiniseka ukuba ikhuselekile ukuyisebenzisa kwi-alloy.Emva kokuba ukhuphe umhlwa, landela le migaqo:
1.Faka isixhobo sokususa umhlwa ngokulandela imiyalelo ekwisikhongozeli.
2.Vumela umhlwa ukuba ahlale ixesha elide njengoko imiyalelo ichaza.
3. Sebenzisa isikrabha senayiloni kuqala ukukhuhla iindawo ezidlelekileyo.Amaxesha amaninzi, oku kuya kwanela ukususa umhlwa.
4. Ukuba kukho amabala anenkani ashiyekileyo, zikhuhle ngentsimbi yokukhuhla ngoboya-kodwa ingabi nzima kakhulu!Uboya bentsimbi bunokubeka imikrwelo enzulu kumavili engxubevange ukuba awulumkanga.Gcina kwindawo yokukhuhla de iindawo zomhlwa zinyamalale kwaye zigude.Nika ingqalelo ngakumbi kwiindawo ezingqonge amandongomane kunye nayo nayiphi na imingxuma embindini wevili.
5.Pula amavili ngamanzi.
6. Sebenzisa isepha, isipontshi namanzi ukucoca amavili.Amabala amancinci anokufuna isicoci samavili.
7.Rinse amavili kwakhona.
8.Vumela amavili ukuba ome.
9. Qaba ipolishi yamavili engxubevange.
Ukuba awufuni ukwenza oko ngokwakho, umonakalo omncinci wokuthambisa unokulungiswa yingcali.Basenokutshiza amavili akho ukuze batshatise isiphelo sokuqala.Inkqubo ngokubanzi ixabisa i-$75 ukuya kwi-120 yeedola.
Ngaba ivili le-alloy kufuneka lihlaziywe ngokupheleleyo ukuze kuqale umkrwelo?
Ukuba unokuva i-ident kwivili lakho, inokufuna ukulungiswa ngokupheleleyo.Le nkqubo iquka ukuba i-lacquer isuswe kwaye ibeke ivili ngeendlela ezininzi zokucoca iikhemikhali.Ngaphambi kokuba kufakwe idyasi entsha ye-lacquer, ukungafezeki kuya kugudiswa okanye kufakwe isinyithi esongezelelweyo.
Ukuthintela umonakalo kwixesha elizayo kwi-alloy wheels yakho, cinga ngokufumana amakhonkco e-nayiloni akhuselayo.
Ngaphambili: Uyilo lweMesh 18inch Aftermarket Ukusuka kwiRayone racing
Okulandelayo: OEM / ODM 18inch 5 × 112 Passenger Car Amavili Kuba Replacement Benz
Amavili eRayone eZithethi eziNhlanu zeMidlalo iiRim 18inch 5 ...
I-DM124 18Intshi yeAluminiyam yeAluminiyam yeAluminiyam iirim zokudlula...
Uyilo oludumileyo lweRayone lweMesh 13/14/15/16/17/18Inc...
DM133 16/17/18Intshi yeAluminiyam yeAluminiyam yeAluminiyam iirimu zevili Fo...
Factory Wholesale 17×7.0 18×7.5 Emva...
China Wheels Factory Rayone DM123 18inch Mesh D...